MUSHROOM MUSHTA: SHARAXAAD IYO SAWIR - MUSHROOMS
Qeexida doofaarka boqoshaada sawir leh
Sanado badan, dadku waxay soo aruuriyeen doofaarro waxayna jecel yihiin dhadhankiisa iyo dhadhanka diyaarinta. Dadka wax soo saarka ah ee qibrada leh waxay ku adkaysanayaan in boqokankani ay gebi ahaanba ammaan yihiin, waa ku filan inay karkariyaan iyaga oo adkeynaya ka hor intaan la karin karin. Marka la barbardhigo bayaankan, waxaa jira ra'yi ku saabsan khatarta iyo qadiimka ah ee hadiyadaha kaynta. Waxaan la yaabanahay waxa khubarada ka fikiraan tan? Isku day inaad fahamto, boqoshaada doofaarka la cuni karo, ama ma aha?
Svushukovyh qoyska - sawir iyo sharaxaad
Dadku waxay u yeeraan doofaarka kala duwan: solokha, dunka, doofaarka dhegaha, qallajin, caano madow. Iyo in maaddada foornada sayniska cilmi ah loo qoondeeyey sida Paxillus incubutus - Doofaarku waa dhuuban yahay - waxayna ka tirsan tahay qoysaska doofaarrada, oo markii hore lagu sharraxay in ka badan boqol sano ka hor. Wakhti dheer, qoyska waxaa loo tixgeliyaa dhexdhexaad ah inta u dhaxaysa bololka iyo boqoshaada agaric. Waqti ka dib, miyuusiyeyaashu waxay u sababeen amarka xabagta, kaas oo la xaqiijiyay falanqaynta phylogenetic molecular. Laakiin inta lagu jiro muddadaa waxaa jiray isbeddello ku dhacay doofaarrada. Qeybo ka mid ah qoysaska, 8 nooc oo Paxillus ah ayaa lagu kala gooyay caleemo gaar ah oo Tapinella ah. Waxaa sidoo kale jira doofaar.
Ma taqaanaa? Svushki ayaa magaceeda ku helay maadado mugdi ah, oo la mid ah wasakhda soo muuqata marka la taabto.
Sharaxaada doofaarku waxay la mid tahay miisaanka. Dhirta fareeshka ah ee geesaha lakulmaysa waa dhexdhexaad ah bartamaha, oo koraaya 14 - 17 cm Dhammaan tijaabooyinka dhallinyaradu waa bunal leh xayawaan olive ah, shaybaaradii hore waxay u egtahay cawl-bunni. Dareemo qallalan oo qallalan ama dabacsan. Xilliga roobka, hawada qulqulaya, xajmiga iyo aan fiicneyn. Haddii aad si adag u cadaadiso ama gooyso geeska - way madoobaan doontaa.
Gudaha miisaanka waa cufan, kareem-midab leh. Midabku wuxuu noqon karaa mid kala duwan, midab jaalle ah oo madow. Ma urineyso. Xilliga kuleylka, waxaa jira inta badan gawaarida xayawaanka ee xayawaanka ku jira.
Maadada waa mid yar, 10 cm oo siman, siman, midabkiisu waa mid la mid ah kan, laakiin waxaa laga yaabaa in ay ku kala duwan yahiin shimbir. Muuqaalka muuqaalka ah ee doofaarka waa taariko been ah oo calaacal ah oo hoosta ka ah. Waxay u eg yihiin lakab oo si sahlan ayaa looga soocaa dusha sare.
In ka badan 35 sano ka hor, boqoshaada doofaarka waxaa loo aqoonsan yahay xaalad ahaan la cuni karo, sida ay dhadhanka, waxaa loo qoondeeyey qaybta afaraad. Iyo buugaagta tixraaca casriga ah ee ku saabsan macluumaadka ku haboonaanta cuntada iyo "khatarta dhimashada" inta badan ayaa laga helaa.
Halka iyo goorta ay koraan svinushki
Waxaad ka heli kartaa dhammaadka guga ilaa bilowga digaag walba meel kasta oo ay ka mid yihiin: waxay ku koraan gumeysiyada, marar dhif ah, si kedis ah, kaymo, geedo, geedo iyo duurka, koritaanka dhoobo iyo xitaa ansillooyinka la tuuro iyo xoqan. Mushroom wuxuu jecel yahay qoyaan iyo hoos. Laga soo bilaabo hal madoow waxaad ka heli kartaa dambiile yar oo buuxa. Waxaa laga helaa xitaa geedo waaweyn, laakiin badanaa waxaa ku jira geedkii iyo boobka. Mararka qaarkood waxay ku koraan xitaa gooyaa.
Kalluumeysatadu waxay ku talinayaan in ay qaataan tijaabooyinka dhallinyarada marka ay weli yihiin kuwo cufan. Waxaa lagu arki karaa qadar yar iyo cadad yar oo shaggy ah. Meelaha hore ee gudaha ah badiyaa waa dabacsan yihiin. Miraha doofaarka sannad walba.
Doofaarku miyuu ku jiraa sunta sunta leh ama la cuni karo?
Mawduucan maanta waxa uu sii wadi doonaa in uu ka hadlo macmiilaha hore ee moodada iyo wakiillada cilmiga sayniska. Marka hore waxa ay tixraacayaan waayo-aragnimada iyo aqoonta awoowayaasha oo cunay kaliya dunks, tan labaad - natiijooyinka cilmi-baarista. Waqtiga hadda la joogo muranka ereyga ugu dambeeya ayaa dhakhtarradu sheegay. Mushroom waa halis. Waxay soo baxdaa in sunta la isku shubi karo isla markiiba, isla markaana waqti yar ka dib, sababtoo ah digaagada cuntada caadiga ah waxay ku ururaan jirka.
Mucjisooyinka ku saabsan edaynta
In kasta oo xaqiiqda laga soo bilaabo 1984, khudaarta khafiifka ah iyo dhumucda ayaa la mamnuucay ururinta, iibinta iyo banaanyaha, waxaa la ururiyaa. Waxay ku dhiirigeliyaan doodaha banaanbaxa: waxay yiraahdaan, awoowe iyo awoowe-awoowe ayaa wax cunay, waxna waxba ma qaban. Cunto-cabirku wuxuu aaminsan yahay in aad xitaa kari karto musqulo sun ah, inta lagu jiro daaweynta kulaylka, dhammaan walxaha sunta ah waa la burburiyaa. Dib-u-celinta waxaa lagu qaadi karaa koobab karkariyo 3 ilaa 4 jeer. Kuwo kale oo jecel dufanka keynta ayaa sharaxaya natiijada daa'in ka dib cunnida solopeni by wareer ee boqoshaada. Waxay yiraahdaan in wax sun ah ayaa si khalad ah u gali lahaa dambiilaha.
Boqortooyada Svushka ayaa la falanqeeyay iyo saynisyahanno marka la eego faa'idadoodii iyo waxyeeladooda. Waxay ka heleen midab madow ee jirka Dunka - atroomentin, oo leh guryaha antibiyootigga ah, iyo aashitada "polyporous acid", taas oo burburin kara burooyinka malignantiga ah. Sida laga soo xigtay dhakhaatiirta, tani kuma filna in la isticmaalo isticmaalka fungus. Waxaa loo isticmaalaa kaliya diyaarinta daawooyinka.
Waa muhiim! Markaad isku dardariso doofaarka iyo buuriga alkolada waxaa ku jira dhumuc xoog leh.
Guryaha sunta ah
Iyada oo la adeegsanayo daraasado fog iyo fiirin cilmiyeed oo cilmi ahaan loo asaasay:
Joogitaanka lectins sunta iyo muscarin ee ka kooban yahay doofaarrada, taas oo haynaya sunta xitaa heerkulka sare. Tani waxay ka dhigan tahay in xitaa marka karkarinta marar badan, svins ay sii ahaanayso sun;
marka la isticmaalo, dunek ee jirka bini-aadamka waxay soo saartaa agglutinins gaar ah, kuwaas oo loogu talagalay in la burburiyo antigens ku jira fangaska oo ku xirma xuubka erythrocyte. Natiijada, habka socodka gawaarida ayaa bilaabmaa - difaaca jirka wuxuu bilaabaa inuu baabi'iyo unugyada dhiigga cas, taasoo keenaysa dhiig la'aan, kilyaha iyo beerka oo dhaawacmay, illaa fashilaadda xubnaha iyo dhimashada;
qaabka isbeddelka ee doofaarka ayaa kor u qaadaya raasamaalka isotopes ee saliida iyo naxaasta;
sunta boqoshaadu waxay u muuqan kartaa ka dib markii muddo dheer ka dib markii ay cunaan boqoshaada, waxay ku xiran tahay astaamaha noolaha. Dareenka dadka ee fayruska fangasku aad ayuu u kala duwan yahay, laakiin carruurta ayaa ugu nugul saamaynta waxyeellada leh.
Waxa aad ku ridi karto dambiishaada, qof walbana wuxuu go'aaminayaa naftiisa. Laakiin ka hor inta aan qiimeynin qiimeynta khatarta. Miyaan u baahanahay?